Vanilla Islands inoshumira iyo African Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Vanilla Islands inoshumira iyo African Tourism Board
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Comoros Breaking Nhau • Madagascar Kuvhuna Nhau • Mauritius Breaking Nhau • Mayotte Breaking Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Reunion Breaking News • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
African Tourism Board (ATB) iri kufara kuzivisa kudomwa kwaPascal Viroleau, CEO weVanilla Islands Organisation, inosanganisira Comoros, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion, neSeychelles, kuBhodi. Achashanda senhengo yeDare reVakagara Vashumiri uye Vakasarudzwa Vemagariro.
Pascal Viroleau akati chinangwa chikuru chesangano reVanilla Islands kuisa nharaunda yeIndian Ocean senzvimbo yepamusoro yezororo repasi rose inopa kusiyana kusingaenzaniswi uye mumwe wemuganhu wekupedzisira wekushanya kwakasimba.
Basa rayo nderekushanda pamwe chete nenzvimbo dzekushanya uye masimba enhengo imwe neimwe yenyika kuti avape hunyanzvi uye zvirongwa zvekubatana zvekuvandudza mukushanda kwekukwezva vashanyi vekumusoro-soro kunharaunda mukubatana pamwe nekubatana pamwe nenhengo dzenyika dziripo. kusimudzira kwekushanya kwezvivakwa.
Sangano reVanilla Islands rinotsvaga kusimudzira ruremekedzo, kubatana, kubatana uye "joie de vivre" pakati penyika dzenhengo kusimudzira zvirinani dunhu mukubatana pasi pemuraira mumwe. Mukuzadzikisa mamishinari akasiyana siyana, sangano richashanda mukubatana pamwe nezvivakwa zvekushanya zviripo zvenhengo dzenhengo.
Sangano iri rinotsvaga kusimudzira yakajairika mhando chitaridzi uye zvakajairika maitiro ayo anosanganisira kudzidziswa nekuchinjana pakati pevashandisi nevadikani kusimudzira mwero uye zviyero nekubatana mune zvakajairika zviito zvine chinangwa chekuvhara mukaha nekusimudzira zviyero ndicho chimwe chinangwa chikuru chinoda kukurumidza kutarisa.